Boorama - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Boorame)
Boorama (Af Ingiriis : Borama; Af carabi: بوراما) (sidoo kale loo yaqaano Borame iyo Boorame) waa magaalo madaxda gobolka Awdal ee waqooyi-galbeed Somaliland, iyo fadhiga dowlada Degmada Boorama.
Magaalada Boorame oo kor laga sawiray.
Suleymaan Xasan Haadi
Boorama waxay u dhowdahay xadka Itoobiya iyo Jabuuti. Magaaladan waxaa degan dad gaaraayo in ka badan 200,000 oo qof. Boorama waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu taariikhda dheer dalka Somaliland, waa dhulkii eey maamuli jireen saldanadii Adal. Deegaanka magaaladu ku taalo waa dhul sare oo buuroleey ah, midaasi oo ka dhigta qaboow wakhtiga jiilaalka.
Magaalada Boorama waa saldhiga waxbarashada dalka Somaliland, waxaa ku yaala dugsiyo, koolejyo iyo jaamacado badan; midaasi oo sababtay in Boorama loo bixiyo "hooyga waxbarashada shacabka Soomaaliyeed". Borama waxa ku yaala Jaamacada ugu wayn waqtigan dalka Soomaaliya ee Jaamacadda Camuud. Intaasi waxaa dheer in Borama tahay meeshii lagu aasaasay heshiisyadii beelaha waqooyiga Soomaaliya ka dib dagaaladii sokeeye ee 1991kii.
Guud ahaan magaalada Borama waa mid jawi degan oo nabad iyo aqoon lagu yaqaano.
2 Dhismaha magaalada
3 Ilaha dhaqaalaha
5 Gaadiidka Safarka
6 Dadka Caanka Ah
7 Magaalo Mataan
Meesha ee ku taalo magaalada Boorama waa dhul buuroleey ah oo mararka qaar Dhulgariir ka dhaco. Boorama waa magaalada kaliya oo ugu dhul gariir badan wadanka jamhuuriyada somalia iyadoo dhul gariiradii ugu badnaa ay ka dhaceen Boorama sanadka markuu ahaa 1980 wakhtigaas oo magaalada Boorama ka dhacay dhul gariiro aad u fara badanaa, sidoo kale waxa la dareemay sanadkii 2011. Sidoo kale dhulgariirka waxoo gaaraa magaalooyinka kale oo ku yaalo gobolka Woqooyi Galbeed. Magaalada Boorama meesha eey ku taalo waa meel qaboow adag ka dhaco wakhtiyada jiilaalka ee u dhexeeya bilaha November ilaa February, waana meel jawigeeda isbadalo.Sidoo kale magaaladu waxey leedahay dhul daaqsiimeey cows badan oo xayawaan badani ku nool yahay. Juquraafi ahaan beesha magaalada Borama ku nooli waxay deegaan ama aay xudoodo la leeyihin sedex beelood oo ka mid ah beelaha Somalida: Ciise oo dhanka Jabuuti ah Isaaq oo aay dhanka Somaliland isla dagaan iyo Ogaaden ooy Ethopia wada dagaan; taasina waxay ka dhigtay dad dhaqan kastaba fahami kara, furfuran oo ka ilbaxsan reeraha kale.
Boorama waxee ka midtahay magaalooyinka aad u soo korooyo, magaaladaan waa magaalo ee dhismo ku socoto,waa magaalada ugu quruxda badan woqooyi galbeed. Waana magaalo leh garoon diyaaradeed. Borama waxay ku jirtaa magaalooyinka ugu cimilada wanaagsan geeska afrika, waana meel aya aad ugu helaan dalxiisayaashu, waa meel biyaha aad ugu qani ah. Borama waa magaalada kaliya ee ayna saamayn dagaalada sokeeye ee ka kadhay dalka, waa magaalo aad u nabadbadan yadoo ay ajaanibku aad u jecelyihiin. Borama waxa ku yaala Jaamacada ugu wayn waqtigan dalka Soomaaliya ee Jaamacadda Camuud, jaamacadan waxay kulmisa dhammaan arday soomaliyeed ee ku kala nool wadanka somalia yadoo ay jaamacadan ay isugu imaadaan. sidoo kale waxa ay leedahay jaamacada Elo- university oo kaalinta sadexaaad ka gashay heerka waxbarasho ee jaamacada soomaaliya qiimanyntii sanadka 2014. Borama waa magaaladii lagu aas aasay Dawlada Somaliland, waa magaalo dadka ku nooli ay nabada aad u jecelyihiin.
Dhaqaalaha magaalada boorama waxee ku tiirsantahay xoolaha iyo beeraha, Waa magaalo ku dadaasho horumarka, sidoo kale waxee leedahay hoteel aad u casriyeesan (Hotel Rays) oo ah Hoteelka Somaliland ugu qurxoon.Inkastoo ee magaaladaan ka tirsantahay dalka somaliland oo aan ictiraaf ka haysan dunida hadana dhaqaalo fiican bay leedahay.Magaalada boorama waxaa laga joojiyay shilin soomaaligii lagu ne badalay lacagta jamhuuriyada Somaliland.
Magaalada Boorame waxa ay aad ugu fiicantahy dhanka waxbarashda, waxeyna leedahay dugsiyo iyo jaamacado wax laga barto oo tayo leh oo ay kamid yihiin Jaamacadaha Camuud & Eelo oo loogu yimaado mandiqada Geeska Africa.
Borama waxa loo yaqaana Hoyga Wax-barashada Soomaaliyeed.
Magaalada Borama ma ahan magaalo madaxda gobolka Awdal oo kali ah ee sidoo kale waa xudunta waxbarashada. Waxaa ku yaala magaalada in ka badan 100 dugsi oo iskugu jira Dugsiyo Hoose, Dhexe iyo Sare. Dugsiyada sare ee ugu caansan magaalada waxaa ka mid ah: Al Aqsa Secondary School, Sh. Ali Jowhar Secondary, Ubaya- Ibnuka'ab Secondary School, Hassan Ardale Secondary School, Aayatiin Secondary School, Waaberi Secondary School, Al Qalam Secondary School, Al Nuur Secondary School and Adam Isaak Secondary School.
Sidoo kale magaalada Borama waa hoyga Jaamacadda Camuud oo ah jaamacadii ugu horeeysay ee laga aasaaso cariga Soomaaliyeed burburkii dowladii Siyaad Bare ka dib. Jaamacada oo dhacda 5km bariga caasimada ayaa waxa dhigta kumanaan ardey ah oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka tirsan mandaqada Bariga Afrika. Waxa iyadna caasimadan ku taala jaamacada heerka sare ah ee EELO American University oo tiirka loo dhigay sanadkii 2005, iyo waliba SAW Community College. 
Waxa iyadna xusid mudan in caasimada Borama tahay hooyga Dugsiga Dhagoolayaash oo ah midkii ugu horeeyay ee laga furo gayiga Soomaaliyeed. Dugsigan dhagoolayaasha waxa uu tababar iyo waxbarasho lacag la'aan ah u fidiyaa dhammaan dadka dhagoolayasha.
Bulshada magaalada Borama waa dad aqoonta aad u tix-galiya taageero fiicana siiya horumarinta wax-barashada. Waxa lagu qiyaasaa in 95% shacabka magaaladu leeyahay aqoon dugsi dhexe, in ku dhow 30% eey aqoon heer jaamacadeed taasi oo iskugu jirta dal iyo dibad.
Gaadiidka ugu muhiimsan ee magaalada Borama waa gaadiidka dhulka kaasi oo isku xidha wadanada Jabuuti, Itoobiya iyo magaalada Borama iyo inta ee Somaliland. Sidoo kale waxay magaalada Borama leedahay Gegada Diyaaradaha Borama (Borama Airport) inkastoo aanu shaqaynin sanadan dambe, balse ay jirto rajo ah in dib u dhis lagu sameeyo.
Dadka Caanka Ah
Dad badan oo heerar kala duwan ah ayaa magaalada Borama deegaan ku ah. Kuwaasi waxaa ka mid ah:
Daahir Rayaale Kaahin, madaxweyihii hore ee Jamhuuriyada Somaliland
Cabdiraxman Saylici, madaxweyne ku xigeenka Somaliland
Yusur A.F Abraar, maareeyaha sare ee Bankiga dhexe Soomaaliya
Dr.Abdirahman Ducale Bayle Wasiirkii hore ee Arimaha Dibada ee Soomaaliay ahna Madaxa mashaariicda dibada ee Afrika Development Bank
Cabdisalaam Cumar, wasiirka arimaha dibeda ee Soomaaliya
Magaalada Borama waxay mataan la tahay magaalada Henley ee wadanka Ingiriiska, taasi ooy leeyihiin xidhiidh aad u fiican.
↑ xadka Itoobiya iyo Jabuuti
↑ "hooyga waxbarashada shacabka Soomaaliyeed"
↑ siyaasada dadka reer Awdal
↑ dhul buuroleey ah oo mararka qaar Dhulgariir
↑ Xadaarada iyo ilbaxnimada reer Borama
↑ Koritaanka magaalada Borama
↑ Borama waxa ku yaala Jaamacada ugu wayn waqtigan dalka Soomaaliya ee Jaamacadda Camuud
↑ EELO American University oo tiirka loo dhigay sanadkii 2005, iyo waliba SAW Community College
↑ Waxbarashada iyo horumarka gobolka Awdal
↑ Gegada Diyaaradaha Borama (Borama Airport)
↑ Aeronautical chart at SkyVector
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Boorama&oldid=206310"
Last edited on 8 Oktoobar 2020, at 16:33
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Oktoobar 2020, marka ee eheed 16:33.